I-RECIPE YE-MOMOS YE-MUSHROOM E-STEAMED- PAMPEREDPEOPLENY.COM - INDAWO YOKUPHEKA
Iresiphi yamaMomos eyomileyo
Ekhaya Izinto zokupheka Umntu otya imifuno Phula ngokukhawuleza Break Break ngokukhawuleza oi-Amrisha Ngu Myalelo weSharma | Ipapashiwe: NgoLwesithathu, Matshi 26, 2014, 6:03 [IST]
I-Momos lelinye lawona masetyana asempilweni. Zidumile eTibet naseNepal nakwindawo esemantla mpuma eIndiya. Zombini ii-momos ezitshisiweyo kunye nezomileyo ziyintandokazi phakathi kweefoodies.
Basempilweni kuba bayabiliswa okuyindlela efanelekileyo yokupheka. IiMomos ziyafumaneka kwizitrato zasesitalatweni, kwiivenkile zokutyela, nakwizitishi zekholeji zesikolo. I-Momos inokufakwa naluphi na uhlobo lwesithako. Ukugcwaliswa kwee-momos kunokwenziwa ngeokholifulawa, inkukhu, ipaneli, itofu, itshizi, amakhowa ukubala ezimbalwa.
Izidombolo ezitshixwayo zinokuba lunyango kubathandi bokutya esitalatweni abanolwazi ngokutya ngokunjalo. Ukuba usekutyeni, kuya kufuneka ukhethe i-momos ene-steamed hayi eyosiweyo. Esinye isibonelelo sokuba ne-momos ene-steamed kukuba zinokupheka ngokukhawuleza. Unokuyonwabela i-momos enencasa yokutya ngokuzalisa kunye nesidlo sakusasa esempilweni. Jonga iresiphi yama-momos efakwe kwi-mushroom.
Iresiphi yeeMos mushroom
FUNDA OKANYE: I-CALORIE EPHANTSI MOMO RECIPE
indlela yokupheka ikeyiki kuxinzelelo lokupheka
I-krystle dsouza kwi-ek hazaaron mein meri behna hai
Ixesha lokulungiselela: Imizuzu eli-15
Ixesha lokupheka: Imizuzu eli-15
1. Yonke umgubo wokudla- 2 iikomityi
2. Amakhowa- 6 (acocwe kakuhle)
3. Ikholifulawa- 1 ikomityi (ecoliweyo)
4. Iikherothi- 2 (ezinqunqiweyo)
usulelo lomngundo kunyango olusebusweni
5.Igalikhi- 5-6 imidumba (ityunyuziwe)
6. Amanzi- 2 iikomityi
7. Ityuwa- ngokwencasa nganye
Unyango lwasekhaya lwentlungu yomlenze kunye nobuthathaka
1. Xovula intlama yomgubo usebenzisa amanzi. Ngoku gubungela inhlama exoxiweyo ngelaphu lokubambelela kwaye uyishiye imizuzu eli-10-15.
2. Okwangoku, xuba zonke izinto eziseleyo ezizee cauliflower, amakhowa, ityuwa, iminqathe kunye negalikhi kwisitya. Gcina ukugxotha ecaleni.
3. Uxove intlama kwakhona emva koko uyiqhekeze ube ziinxalenye ezincinane ezijikelezayo. Qengqa isahlulo ngasinye kwibhola encinci. Gcina umbindi webhola eqengqelekileyo ukwenza isiseko kwaye uthintele ukuba ungaphuli. Gcina imiphetho yebhola inciphe kakhulu.
4. Beka izinto phakathi kwibhola esongiweyo. Manzisa iminwe yakho uze uyivale ngokupheleleyo ibhola.
Imimangaliso yesayi baba emva kokubhubha kwakhe
5. Phinda kwakhona inkqubo efanayo kunye nenhlama eseleyo kunye nokugxotha. Beka ii-momos kwi-steamer enkulu nangaphezulu kwamanzi abilayo. Ukuba uyafuna, ungagcoba isitya se-steamer ngeoyile encinci ukukhusela amadombolo ekubambeni.
6. Qinisekisa ukuba ii-momos zibekwe kumgama omncinci kwaye azincamathelani. I-steam momos imizuzu eyi-8-10 kwilangatye elisezantsi.
I-momos yama-mushroom e-steamed ikulungele ukutya. Bancede batshise nge-tomato ketchup kunye nesobho.
Ubusika bulapha: Ukutya kwaseIndiya kukugcina ushushu kwaye usempilweni ngeli xesha lokubanda
UVidya Balan: Shimmers eAnita Dongre
Izithethe ezahlukileyo ezenziwa ngamaIndiya ngexesha lokukhulelwa
Nini ukuwanga intombi yakho
Ukubaluleka kweConch Shell kubuHindu
Ngokukhawuleza nangokulula i-Badam Milk Puri
Uyisebenzisa kanjani iitumato kulusu olunamafutha?
Iingcebiso zokutya ezisuka kwiimodeli ukunciphisa umzimba
Usuku lweSizwe lweMali 2020: Izibonelelo zezeMpilo ezili-10 zoBisi lweOat ozenzelayo
Iindlela ezili-12 ezifanelekileyo zokusebenzisa iTulsi kulusu neenwele
Izibonelelo zejinja, igalikhi kunye nobusi ngamanzi ashushu
Nantsi indlela onokuphumelela ngayo i-310 yezigidi zeerandi ezivela eIndiya!
ubumba njani amashiya ekhaya ngentambo
omega 3 iziqhamo kunye nemifuno-uluhlu lwayo
indlela yokwenza i-curry ishiya ioyile
I-swami vivekananda ibali lobuntwana kwi-hindi
ungalunga njani kwiveki enye
Iindlela ezintsha zekerala ebekwe sree